Hetsika Rohy : “fifidianana tsy mitanila no takina” | NewsMada
Hetsika Rohy : “fifidianana tsy mitanila no takina”
Hanao ahoana ny ho fiasan’ny governemantan’ny marimaritra iraisana? Maneho ny fijeriny ny hetsika Rohy, mitaky fifidianana tsy mitanila.
“Azo antenaina ve fa hitantana ny firenena ara-drariny ary hanomana sy hiara-miisalahy amin’ny Ceni amin’ny fanatanterahana ny fifidianana tsy mitanila sy hoeken’ny rehetra izay hany dingana voalohany sy manan-danja amin’ny famahana ny krizy amin’ny fametrahana ity governemanta misy lokon’ny mpanao politika HVM sy Mapar azy Tim ity?”
Io ny fanontanian’ny hetsika Rohy tamin’ny fanambarany teny amin’ny foibe toerany, Ambatonakanga, omaly, momba ny governemanta Ntsay Christian. Azo sokajina telo ireo minisitra, araka ny fanadihadiana sy ny fijerin’izy ireo.
Ao ireo minisitra efa tsy nahitam-bokatra
Ao ny mpanao politika efa tsy nisy vokatra tsara mba azony tamin’ny nitantanany. Nefa voatendry hisahana ireo minisitera stratejika miandraikitra ny otrikarena, ny hery ara-toekarena sy ny varotra, ny fifandraisan-davitra sy ny serasera… Efa fantatry ny maro ny ho fomba fiasany sy ny fanararaotam-pahefana hataony mba hahazoany tombontsoa manokana. Eo koa ny hanangonany ny hoenti-manana hiatrika ny fifidianana.
Ao ireo hanome tosika amin’ny fifidianana
Ao koa ny mpanao politika voatendry any amin’ny minisitera misahana ny sosialim-bahoaka, izay maro ny olon’antoko mbola tsy nitantana minisitera na efa nitantana fa tsy nahomby. Tsy ny hihazakazaka hifehy sy hamoritra ireo mpiasam-panjakana marobe ao amin’ny sehatry ny fahasalamana, ny fampianarana, ny mponina, ny tanora… hanome tosika amin’ny fifidianana ve no mahamaika ao?
Ao ny teknisianina tokony hahefa tsara ny andraikiny
Ao ny voatendry araka ny traikefa sy ny tsilian-tsofina fa mba azo antenaina ary ampirisihina hijoro hatramin’ny farany. Arahabaina ary irina mba hahatana ny fomba fiasany lavitry ny kolikoly, ohatra, ny minisitry ny Fitsarana. Eo koa ny minisitry ny Atitany, teknisianina tokony hahafehy tsara ny andraikiny raha tsy mitanila. Anisan’ny ivo sy andry iankinana hahay hiara-miasa amin’ny Ceni amin’ny fikarakarana sy fitantanana ny fifidianana tsy mitanila ary hoeken’ny rehetra izy ireo.
Ampirisihin’ny hetsika Rohy ny antoko sy ny mpanao politika mahatsiaro tena hametraka ny lamina rehetra amin’ny hiatrehana fifidianana tsy mitanila, eken’ny rehetra miainga amin’ny lalàm-pifidianana ifanarahana sy eken’ny rehetra.